Nisalasala momba ny fisian’Andriamanitra
Nisalasala momba ny fisian’Andriamanitra, mahazo antoka ankehitriny fa misy Izy
"Jehovah ô, … hidera Anao aho, fa mahatahotra sy mahatalanjona ny nanaovana ahy ; mahagaga ny asanao ; … natao tao amin’ny miafina aho, ka noforoninao hisy endrika." Salamo 139:1,14,15
“Tsy mino aho fa misy Andriamanitra, tsy mino na inona na inona aho. Saingy rehefa mahita zaza vao teraka aho, mijery ireo rantsantanan-keliny tena tsara tefy…, dia manomboka misalasala ka manao anakampo hoe : nisy nahary tokoa izy.”
Mpanao politika fanta-daza iray
“Na dia tsy misy porofo hafa aza fa misy Andriamanitra, ny ankibeko ihany dia efa haharesy lahatra ahy fa misy Izy.”
Isaac Newton (1643-1727, matematisiana, fizisiana)
“Ny fiezahana hanazava ny fipoiran’ny aina avy tamin’ny kisendrasendra, dia toy ny fiheverana hoe nisy rakibolana niforona ho azy tamin’ny fipoahan’ny trano printy iray.”
Edwin Conklin (1863-1952, biolojista amerikana)
“Amiko, ny fiheverana fa niforona ho azy ity tontolo hita maso ity, dia hevi-dravina ihany. Tsy azoko heverina hoe ho nisy izao tontolo izao raha tsy nisy Mpahary azy, izany hoe Andriamanitra.”
Alfred Kastler (1902-1984, Loka Nobel amin’ny fizika 1966)
Henoy ny Baiboly, izay Tenin’Andriamanitra :
“Fa ny fombany tsy hita, dia ny heriny mandrakizay sy ny maha-Andriamanitra Azy, dia miseho hatramin’ny nanaovana izao tontolo izao, fa fantatra amin’ny zavatra nataony ; ka dia tsy manan-kalahatra ireo” (Romana 1:20).
“Izy (Jesosy Kristy) no endrik’Andriamanitra tsy hita, … fa tao aminy no nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy etỳ ambonin’ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, … Izy no nahariana ny zavatra rehetra, sady ho Azy izany” (Kolosiana 1:15-16).